ဒီအသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ကုသိုလ်ကံမကောင်းခဲ့ပုံတွေကို ၀မ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့ အေးသီတာ – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် အေးသီတာဟာ အခုချိန်ထိ အိုးပိုင်အိမ်ပိုင် မနေရတဲ့ အတွက် ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်လာခဲ့ ပါတယ်နော်။ ကိုဗစ်ရောဂါစဖြစ်တဲ့ အချိန်မှစပြီး အခုထိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိသေးတာကြောင့် ဈေးရောင်းပြီး ရှာဖွေစားသောက်နေနေရပါတယ်နော်။
” အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နေရကံ မပါသူများထဲမှာ ဒေါ်အေးသီတာတို့ထိပ်ဆုံးကပါ ပထမတခါFather landမှာတန်ဘိုးနည်းအိမ်ယာဝယ် သိန်း၆၀ကျော်လောက် သွင်းပီးပိုင်ရှင်ဖမ်းခံရ ပိုက်က်ဆံပြန်ရသူရပေါ့တချို့ကလည်းသူတို့ ပိုက်ဆံပြန်ရတာကိုဖုံးဖိထားတယ်ထားပါတော့ဒါပေမယ့်သူတို့ရပြီးကိုယ်တွကိုမပြောချင်နေပါ….
ခုတော့ကိုယ်သွားတောင်းမယ် ဆိုတားအိုက်ဒါနဲ့တပြားနဲ့တချပ်မှမရလိုက်ခုအိမ်ပိုင်လေးရအဆင်ပြေမယ်လည်းကြံရောငဗစ်ပ ဒုငစစ်ပီးတော့ငဗစ်ပြန်😎😎😎😎ခုတော့လည်းအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ဘို့ဝေးလေစွဒီနေ့နက်ဖန်ရုပ်နဲ့နာမ်တွဲနေပါ့မလားတွေးရင်း🤒🤒🤒🤒” လို့ ခံစားချက်တွေ ပြောပြထားပါတယ်နော်။
ဒီအသကျအရှယျရောကျတဲ့အထိ ကုသိုလျကံမကောငျးခဲ့ပုံတှကေို ဝမျးနညျးစှာပွောပွလာတဲ့ အေးသီတာ
ပရိသတျကွီးရေ ဇာတျပို့သရုပျဆောငျ အေးသီတာဟာ အခုခြိနျထိ အိုးပိုငျအိမျပိုငျ မနရေတဲ့ အတှကျ ခံစားခကျြတှကေို ရငျဖှငျ့လာခဲ့ ပါတယျနျော။ ကိုဗဈရောဂါစဖွဈတဲ့ အခြိနျမှစပွီး အခုထိ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ မရှိသေးတာကွောငျ့ ဈေးရောငျးပွီး ရှာဖှစေားသောကျနနေရေပါတယျနျော။
” အိုးပိုငျအိမျပိုငျနရေကံ မပါသူမြားထဲမှာ ဒျေါအေးသီတာတို့ထိပျဆုံးကပါ ပထမတခါFather landမှာတနျဘိုးနညျးအိမျယာဝယျ သိနျး၆ဝကြျောလောကျ သှငျးပီးပိုငျရှငျဖမျးခံရ ပိုကျကျဆံပွနျရသူရပေါ့တခြို့ကလညျးသူတို့ ပိုကျဆံပွနျရတာကိုဖုံးဖိထားတယျထားပါတော့ဒါပမေယျ့သူတို့ရပွီးကိုယျတှကိုမပွောခငျြနပေါ….
ခုတော့ကိုယျသှားတောငျးမယျ ဆိုတားအိုကျဒါနဲ့တပွားနဲ့တခပျြမှမရလိုကျခုအိမျပိုငျလေးရအဆငျပွမေယျလညျးကွံရောငဗဈပ ဒုငစဈပီးတော့ငဗဈပွနျ😎😎😎😎ခုတော့လညျးအိုးပိုငျအိမျပိုငျဘို့ဝေးလစှေဒီနနေ့ကျဖနျရုပျနဲ့နာမျတှဲနပေါ့မလားတှေးရငျး🤒🤒🤒🤒” လို့ ခံစားခကျြတှေ ပွောပွထားပါတယျနျော။